05 STYLISH ASH HAIR COLOR IDEAS ALWAYS ON POINT
No Comments on 05 STYLISH ASH HAIR COLOR IDEAS ALWAYS ON POINT
အမြဲတမ်း အကြည့်ကိုဖမ်းစားနိုင်စေမယ့်ဆံပင်အရောင် ၅ မျိုး
Ash brown hair isahue shade between light brown and blonde. Ash isacolor that looks great on most skin tones because it softens the look of your facial features. While the creamy color subtly frames your face and givesafeminine aura.
Ash brown ဆိုတာကတော့ အညိုဖျော့ဖျော့ နဲ့ ရွေဝါရောင်ကြားထဲကအရောင်လေးပါ။ မီးခိုဖျော့ဖျော့အရောင်က မျက်နှာရဲ့အသွင်အပြင်ကို ပျော့ပျောင်းသွားစေတဲ့အတွက် ဘယ်လိုအသားအရောင်နဲ့မဆို လိုက်ဖက်တဲ့အရောင်တစ်မျိုးပါ။ ခရင်မ်ရောင်လေးတွေကတော့ မျက်နှာရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုပေါ်လွင်စေပြီး မိန်းမသားဆန်တဲ့အငွေ့အသက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Below are the Ash Hair Colors You Should Try:
ဒါကြောင့် တစ်ခါလောက်ဆိုးကြည့်ရုံနဲ့နောင်တမရစေမယ့် Ash color လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Milk Tea Ash Brown (Milk Tea လို အညိုဖျော့ဖျော့အရောင်)
2. Silvery Ash (ငွေရောင်ဖျော့ဖျော့)
3. Warm Ash Brown (အညိုနဲ့မီးခိုးဖျော့)
4. Golden Ash Brown (ရွှေရောင်နဲ့အညိုဖျော့ဖျော့ )
5. Pink Ash Brown (ပန်းရောင်နဲ့ အညိုဖျော့ဖျော့)
Tags hair, ootdmyanmar
EASY ONLINE SHOPPING WITH HEARTY HEART COSMETICS
No Comments on EASY ONLINE SHOPPING WITH HEARTY HEART COSMETICS
HEARTY HEART COSMETIC နဲ့ လွယ်ကူသက်သာတဲ့ ONLINE SHOPPING
Even though the strict stay at home policy has been lifted. We are still advised to stay at home (as much as possible) and wear face mask when we go out.
But some times we still need to go out and do our errands. Which puts us at risk to get infected . But thank God to the businesses who were able to cope up with the situation and are offering online shopping and online delivery.
stay at home စည်းကမ်းကို ဖြေလျော့ပေးလိုက်ပေမယ့် အားလုံး တတ်နိုင်သမျှ အိမ်မှာနေကြဖို့နဲ့ မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရတဲ့အခါ mask တပ်ဖို့ စတဲ့အချက်တွေကို လိုက်နာရဦးမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဝမ်းရေးအတွက် အပြင်ထွက်ကိုထွက်ရမှဖြစ်မယ့်အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်။ အပြင်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးခံရမလားဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ စွန့်စားပြီး ထွက်နေကြရတာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုက online shopping နဲ့ online delivery အဖြစ်ပြောင်းလဲလာကြပြီမို့ ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။
One of which is one of our favorite make up brands, Hearty Heart Cosmetics.
They recently launched an online shopping thru their Facebook page and here’s how it goes.
အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ OOTD ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး make up brand တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hearty Heart Cosmetics လဲ ပါဝင်ပါတယ်။
1. First, you open the chat box, then you have the option to choose English or Burmese.
1. ပထမဆုံး hearty heart ရဲ့ chat box ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် English နဲ့ Burmese ဆိုပြီး ဘာသာစကားနှစ်မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
2. Then, you can either chat with an admin or buy directly.
2. ဘာသာစကားရွေးပြီးရင်တော့ admin နဲ့စကားပြောမလား၊ တိုက်ရိုက် ပစ္စည်းဝယ်မလားဆိုတာ ရွေးပေးရပါမယ်။
3. The products has its categories. There is “Face, Lips, and Eyes”. So it’s easy to find the product/s you need.
3. Product လေးတွေအတွက် “Face, Lips နဲ့ Eyes” ဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲပေးထားတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ product ကို ရှာရတာ ပိုလွယ်ကူသွားပါတယ်။
*Each product has details including price, how to to use and store it and cautions of products.
*Porduct တစ်ခုချင်းစီအတွက် အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ၊ အသုံးပြုပုံ၊ သိမ်းဆည်းပုံ နဲ့ သတိထားသင့်တဲ့အချက်လေးတွေလည်း ရေးပေးထားပါသေးတယ်။
4. After choosing the product, you either ” add to cart” or “Buy now”.
4. ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Product ကို ရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ” add to cart” ဒါမှမဟုတ် “Buy now” ကို ရွေးရပါမယ်။
“Arrival date” will be shown once you fill out the shipping address.
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်လိပ်စာကို ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင် ပစ္စည်းရောက်မယ့်နေ့ “Arrival date” လေးကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။
There are two types of orders; In stock or pre order.
Order မှာ Pre order နဲ့ in stock ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်။
See how easy it goes?
ကဲ.. ဘယ်လောက်လွယ်ကူလဲဆိုတာ သိပြီဟုတ်?
ပျော်ရွှင်စရာ online shopping လေးဖြစ်ပါစေနော်။
Tags heartyheartcosmetics, onlineshopping
OOTDMYANMAR’S JULY FAVORITES
No Comments on OOTDMYANMAR’S JULY FAVORITES
ဇူလိုင်လအတွက် OOTDMYANMAR ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးပစ္စည်းများ
Hello, loves! Today, we will be sharing with you our July Favorites! These are products, from beauty to skincare, to fitness, to home essentials, for your fur babies, and fashion, that we love. These products that are tried, tested, and loved! Let’s go on to it!
ဇွန်လအတွက် OOTDMYANMAR ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးပစ္စည်းများ
မင်္ဂလာပါအချစ်တို့ရေ။ ဒီနေ့မှာတော့ အချစ်တို့ကို OOTD ရဲ့ ဇွန်လအတွက် အနှစ်သက်ဆုံးပစ္စည်းတွေအကြောင်း ပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ဒီထဲမှာ OOTD က သဘောကျတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း၊ အားကစားပစ္စည်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း နဲ့ အိမ်မွေးတိရိစာ္ဆန်လေးတွေအတွက် ပစ္စည်းတွေ အပြင် ဖက်ရှင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
1. Milk Whitening Night Cream from Hearty Heart
It’s 4,995 KS. A night cream with real milk extract that whitens and moisturizes. Mind you, when you wake up you’ll see the difference.
၄၉၉၅ ကျပ်သာကျသင့်တဲ့ night cream က နို့အစစ်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားလို့ အသားအရည်ကို ဖြူဝင်းပြီး အစိုဓာတ်ပြည့်ဝစေမှာပါ။ မနက်အိပ်ယာနိုးတာနဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ခံစားရစေမယ့် ပစ္စည်းလေးပါ။
2. 4D Brow Marker (04 Hot Cocoa)
It’s 3,285 KS. It’s waterproof, smudge proof, long lasting and with its4tips its precise and easy to use. What’s not to love right?
ဒီပစ္စည်းလေးကတော့ ၃၂၈၅ ကျပ် ပါ။ ရေစိုခံ၊ မပေမကျံဘဲ ကြာရှည်ခံတဲ့အပြင် ထိပ်မှာပါတဲ့ အချွန်လေးခုကြောင့် ဆွဲရတာ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ ကဲ.. မကြိုက်ချင်စရာအချက်တောင် မတွေ့ဘူးဟုတ်။
Make sure to check out Hearty Heart’s improved way to shop online on their Facebook messenger.
Hearty Heart ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်တဲ့ Facebook Messenger ကနေ မှာယူလို့ရမယ့်အကြောင်းလေးကို ဖတ်ကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
1. Coffee Table with mirror from Ocean Supermarket (Ocean Supermarket က မှန်ပါတဲ့ Coffee Table)
It was on sale at 15,000 KS (Original price was 30,000 KS)
We love how stylish and functional it is.
ဒီစားပွဲလေးက တစ်သောင်းခွဲ ကျပ်လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးနေတာပါ။ (မူရင်းဈေးကတော့ သုံးသောင်းကျပ်ပါ။)
စတိုင်ကျပြီး အသုံးဝင်လို့ အရမ်းသဘောကျပါတယ်။
2. Ginger Flower Odor Remover from Hope Scents solutions (Hope Scents solutions ရဲ့ Ginger Flower Odor Remover)
We got it from Plant House Cafe for 4,500 KS
ဒီပစ္စည်းလေးကိုတော့ Plant House Cafe ကနေ ၄၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ခဲ့တာပါ။
This is so perfect to eliminate bathroom and garbage odor, cigarette smell and even on pet accidents.
သူ့အနံ့လေးက ရေချိုးခန်းအိမ်သာ နဲ့ အမှိုက်နံ့ တွေအပြင် ဆေးလိပ်နံ့ နဲ့ အိမ်မွေးတိရိစာ္ဆန်လေးတွေရဲ့ အနံ့ကိုပါ ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
3. Bamboo Straw from Palu Myanmar (Palu Myanmar ရဲ့ Bamboo Straw)
We also got bought this from Plant House Cafe. It’s around 4,000 KS. It comes with2bamboo straws, brush &acase. #saynotoplasticstraw
ဒီ Bamboo Straw လေးကိုလည်း Plant House Café ကနေ ဝယ်ခဲ့တာပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၄၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ပါ။ bamboo straw နှစ်ခု brush နဲ့ case လေးတစ်ခု ပါပါတယ်။ #saynotoplasticstraw
4. Glass Vase from Japan store (Japan Store က ဖန်ပန်းအိုး)
It’s only 2,800 KS and its so chic!
ဈေးနှုန်း ၂၈၀၀ ကျပ်ပဲရှိပြီး အရမ်းစတိုင်ကျပါတယ်။
5. Cactus from ootdmyanmarstore (ootdmyanmarstore ရဲ့ Cactus )
It’s 4,500 KS. Adding plants to your space is so therapeutic.
ဈေးနှုန်းကတော့ ၄၅၀၀ ကျပ်ပါ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပင်လေးတွေစိုက်ထားတာက ကျန်းမာရေး ကုထုံးတစ်ခုလိုပါပဲ။
1. 1KG Dumbells from MINISO (MINISO က 1KG Dumbells )
It’s 6,000 KS per piece. It’s great for you HIT workouts at home.
ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ခုကို ၆၀၀၀ ကျပ်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ HIT workout လုပ်ချင်သူတွေအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။
FUR BABY ESSENTIAL:
1. Blueberry Treats from Pet House Yangon
It’s 2,800 KS. It’s healthy and good for your dogs.
၂၈၀၀ ကျပ်ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့သင့်လျော်ပြီး ခွေးလေးတွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။
1. Pasoe from UKK BURMESE PRIDE (UKK BURMESE PRIDE ရဲ့ ပုဆိုး)
It’s around 12,000-14,000 KS. The style and quality of this pasoe is superb.
ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၂၀၀၀ – ၁၄၀၀၀ ဝန်းကျန်ရှိပါတယ်။ စတိုင် နဲ့ အရည်အသွေးကတော့ ပြောစရာကိုမလိုလောက်အောင် ကောင်းပါတယ်။
Tags heartyheartcosmetics, Julyfavorites
SIX-FASHION FIX TO HELP YOU RN
No Comments on SIX-FASHION FIX TO HELP YOU RN
We all have our fashion flaws at times. Whether it beasweaty armpits,apeeking gap between two buttons ofashirt, dirty collars, and the list goes on.
လူတိုင်းမှာ ဖက်ရှင်နဲ့ပက်သက်တဲ့ အားနည်းချက်လေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ ချိုင်းချွေးထွက်တာ၊ ရှပ်အင်္ကျီဝတ်ရင် ကြယ်သီးနှစ်လုံးကြားမှာ ဟ နေတတ်တာ၊ အင်္ကျီကော်လာတွေညစ်ပတ်တာ နဲ့ အခြားအကြောင်းအရာများစွာရှိပါတယ်။
These situations may be embarrassing and could at least beasource of low confidence. So, why let these ‘simple problems’ shatter your confidence right?
ဒီအချက်တွေကြောင့် အရှက်ရစေနိုင်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလျော့နည်းလာတာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီရိုးရှင်းတဲ့ပြဿနာလေးတွေက ဘာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို ယိမ်းယိုင်စေမှာလဲနော်။
On that note, we foundaquick fix on these fashion problems. SlickFix Myanmar isaquick fix for all your fashion faux pas! They offer six well-researched products to address your daily fashion and grooming needs.
အဲ့ဒီပြဿနာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းလေးတွေ ရှာတွေ့ထားပါတယ်။ SlickFix Myanmar က ဖက်ရှင်နဲ့ပက်သက်ပြီးအရှက်ရစေတဲ့ပြဿနာတွေကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျ လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ product တွေက ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ လိုအပ်နေတာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Backed by an experience of 35 years in adhesive products from industrial to medical spaces, they decided to take the expertise to the consumer level.
စက်မှုလုပ်ငန်း နဲ့ ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာ ၃၅ နှစ်ကြာအောင် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကို ဈေးကွက်ထဲအထိ ချဲ့ထွင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Their test results are proof of our well-researched, skin-safe adhesive tapes.
စမ်းသပ်မှုရဲ့ရလဒ်တွေအားလုံးက စနစ်တကျစစ်တမ်းပြုလုပ်ထားပြီး အသားအရည်ကို မထိခိုက်စေတဲ့ တိပ် အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။
SlickFix Myanmar’s goal is to empower ambitious, carefree individuals to fulfill their dreams without worrying about what others think about their dressing.
SlickFix Myanmar ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို မြှင့်တင်ပေးဖို့၊ အိပ်မက်တွေကို ပူပန်ကြောင့်ကြမဲ့ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ပက်သက်ပြီး အများရဲ့အမြင်ကို စိတ်ပူစရာမလိုဖို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
And these are the products from them that we are loving:
ဒီ Product တွေကတော့ OOTD MYANMAR အကြိုက်တွေ့သွားတဲ့ Product တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
#1 &2 Collar and Cuff Grime Protectors
This solves discoloured collars or dirty cuffs show up.
ဒီပစ္စည်းလေးက အင်္ကျီကော်လာတွေ အရောင်မှိန်သွားတာ၊ အင်္ကျီလက်တွေညစ်ပတ်ကုန်တာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ video လေးကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
#3 Fashion Dressing Tape
A peeking gap between two buttons of your shirt? Problem solved!
အင်္ကျီကြယ်သီးနှစ်လုံးကြားမှာ ဟ နေပါသလား? ဒီပစ္စည်းလေးနဲ့သာ ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။
#4 Ear Lobe Tape
There is no need to take off your heavy earrings! Your split earlobes are protected too. Watch this video to know how.
အရွယ်အစားကြီးတဲ့နားကပ်တွေဝတ်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်လို့ သိမ်းထားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ Earlobes တွေက ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲသိရအောင် ဒီ video လေးကို ကြည့်ပေးပါ။
#5Underarm Sweat Pad
Say goodbye to sweat stains.
#6 Nipple Covers
Keep your backless dress look seamlessly chic.
Nipple covers! Dare to wear whatever you want. Dropamessage to orderapack! #SlickFixMyanmar . . . . #slickfix #nipplecover #tape #myanmar #yangon #ordernow #shopping #fashionaccessories #fashion #skinfriendly #fabricfriendly
A post shared by SlickFix Myanmar (@slickfix_myanmar) on Jun 8, 2020 at 2:18am PDT
Product တွေကို ဒီမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Instagram at https://www.instagram.com/slickfix_myanmar/
Facebook at https://www.facebook.com/Slickfixmm/
Tags fashionhacks, ootdmyanmar
ICE CREAM – INSPIRED LIPSTICKS TO MAKE YOUR LOOK SWEETER
No Comments on ICE CREAM – INSPIRED LIPSTICKS TO MAKE YOUR LOOK SWEETER
They even smell sweet, too!
ဆိုးလိုက်ရင် ချစ်စရာကောင်းသွားစေမယ့် ရေခဲမုန့် နှုတ်ခမ်းနီလေးများ
Hearty heart’s best-selling matte lipsticks, Ice Cream swirls would definitely make your #motd game on point! This local beauty brand was inspired by none other than everyone’s favorite dessert: ice cream!
Hearty Heart ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Ice Cream swirl matte နှုတ်ခမ်းနီတွေက အချစ်တို့ရဲ့ #motd ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားစေမှာ အသေအချာပါပဲ။ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ Hearty Heart နှုတ်ခမ်းနီက အားလုံးနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ ရေခဲမုန့် ကို မှီငြမ်းပြီး ထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
The ‘Ice cream swirls’ collection isatwo-in-one lip makeup inspired by different kinds of sweet blends, and mind you with it’s Vitamin E formula your lips would be healthy and beautiful. There’s Mango Berry Tango, Bubble Gum Pink, Caramel Fudge Brownie, Strawberry Apple Cupcake, Milk Chocolate Chip Cookie Dough, and Red Velvet Cheesecake. And if these flavors aren’t enough motivation to add to your purchase, these lip products has Vitamin E formula to make your lips beautiful and healthier at the same time.
‘Ice cream swirls’ collection လေးက နှစ်မျိုးသုံး နှုတ်ခမ်းနီဖြစ်ပြီး ချိုမြိန်မှုအရသာအမျိုးမျိုးကို မှီငြမ်းထားတဲ့အပြင် Vitamin E ပါဝင်တဲ့အတွက် နှုတ်ခမ်းသားကို ကျန်းမာပြီး လှပလာစေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီတွေကတော့ Mango Berry Tango, Bubble Gum Pink, Caramel Fudge Brownie, Strawberry Apple Cupcake, Milk Chocolate Chip Cookie Dough နဲ့ Red Velvet Cheesecake ဆိုပြီး အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီတွေရဲ့ အနံ့နဲ့အရသာက အချစ်တို့ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ မလုံလောက်သေးဘူးလား။ Vitamin E ကိုပါ ထည့်ဝင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ကျန်းမာလာစေမယ့်အပြင် တချိန်တည်းမှာပဲ လှပစိုပြေလာစေမှာနော်။
PS. If you want to purchase these products you can check out Hearty Heart’s Facebook Page.
PSS It’s so much easier to shop online in Hearty-Heart’s messenger in Facebook. We’ve tried it and we are impressed.
PS. နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေ မှာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Hearty Heart ရဲ့ Facebook Page မှာ ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ။
PSS. Hearty-Heart ရဲ့ Facebook messenger ကနေ ဝယ်ယူရတာ အရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ်။ OOTD လည်း သူတို့ရဲ့ messenger ကနေမှာကြည့်ပြီး လွယ်ကူမြန်ဆန်လွန်းလို့ အရမ်းသဘောကျနေပါပြီ။
Model @Chan Myae Thu/ Make-up @khaing_mua
Tags heartyheartcosmetics, ootdmyanmar, review, reviews